Sababta keentay dib u dhaca doorashooyinka Somaliland oo la shaaciyey
Cabdiqaadir Iimaan Warsame, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland | Xuquuqda Sawirka: GO
HARGEYSA, Somaliland – Guddiga Doorashooyinka Somaliland ayaa maanta oo Khamiis ah shaaciyay in markii lixaad uu dib u dhac ku yimid doorashooyinka Goleyaasha degaanka iyo baarlamaanka.
Cabdiqaadir Iimaan Warsame, gudoomiyaha guddigaasi oo warfidiyeenka kula hadlay Hargeysa isaga oo ay hareer-taagan yihiin xubnaha guddiga ayaa ku sababeeyay "duruufo farsamo iyo mid sharci".
Warsame ayaa soo bandhigay illaa iyo afar qodob kuwaasi oo uu tilmaamay in ay qayb ka yihiin baaqashadda doorashadda, kuwaasi sidda ku xusan war-saxaafadeed uu soo saarey guddiga, kala ah;
Xeerka doorashooyinka oo aan diyaar ahayn. (Xeerkan ayaa wuxuu horyaalaa Golaha Wakiiladda, welina cod looma qaadin).
Diiwaan-gelinta cod-bixiyeyaasha oo aan wali qabsoomin. (Sababta waxay tahay muranadii dhacay bilooyinkii u dambeeyay).
Sidda uu dhigayo qodobka 9 ee xeer 20 ee sanadkii 2001-dii, guddiga doorashooyinka waxaa ku waajib ah in uu cayimiyo waqtiga ay doorashada qabsoomeyso 120 maalmood kahor maalinta doorashada
Daruufaha farsamo, siyaasaadeed iyo sharci. (Inkasta oo uusan fahfaahin dheeraad ah ka bixin waxay yihiin caqabadahaasi).
Doorashooyinkan baaqday ayaa waxaa lagu waday in ay qabsooman 12-ka December ee sanadkan, waana bil kahor dhamaadka mudada xileedka Golaha Wakiiladda ee haatan shaqeynaya.
Isaga oo u muuqda mid guddiga ka fogeynaya cidda qaadeysa mas’uuliyadda dib u dhacyadda doorashooyinka, gudoomiye Warsame ayaa wuxuu ka meer-meertay in uu cadeeyo cidda mas’uulka ka ah.
"Annaga guddi ahaan wax kasta oo suurtogelin lahaa qabsoomida doorashadda waanu diyaarinay," ayuu ku jawaabay markii ay warbaahinta waydiisay cidda dambeysay mas’uuliyadda baaqashada doorashooyinka.
Is-qabqabsiga siyaasadeed ee hareeyay doorashooyinka ayaa ku foorara Guddiga xili axsaabta mucaaradka ay shaki ka muujiyay xubnaha xisbiga talada haya ee KULMIYE iyo dhexdhexaadnimada guddiga oo idil.
Mar la waydiiyey gudoomiyaha, si xal loo helo in ay iyaga meesha ka baxaan, lana soo dhiso guddi cusub ayuu gebi ahaanba ganafka ku dhuftay, wuxuuna wacad ku maray in ay sii wadayaan hoosha inta uu waqtiga ka idlaanayo.
"Sharci ma aaney ahayn in aan tagno annaga oo shaqo qabanay, annaga oo aanan dambi nagula hayn, annaga oo aan nidaamkii lasoo marin. Haddana waxaan ka tageynaa marka uu waqtigeena dhamaado," ayuu ku war-celiyay.
Dib u dhacyadda doorashooyinka Somaliland ku imaanaya ayaa la rumeysan yahay in ay niyad-jab ku rideyso dadweynaha iyo beesha caalamka, isla markaana ay su’aal gelineyso dimoqraadiyadda maamulkaasi.
Shaacinta guddiga ayaa kusoo beegmaysa iyadda oo bishii hore xisbiyadda siyaasadda iyo xukuumadda ay isku raaceen in la qabto doorashadda, isla markaana la kordhiyo tirada xubnaha guddiga doorashooyinka.
Somaliland oo soo saartey go'aan ka dhan ah Muqdisho xili ay xiisad jirto
Somaliland 25.12.2019. 21:34
Maamulka Hargeysa ayaa sheegta gooni u goosad balse ma haysto aqoonsi caalami ah.
Urur caalami ah oo cambaareeyay xariga Somaliland ee laba Telefishin
Somaliland 20.06.2019. 07:53
Somaliland oo ka shaqeynaysa sidii "looga takhalusi lahaa" Farmaajo
Soomaliya 26.05.2019. 07:33
DF: Somaliland way soo magacaaban kartaa Wasiirka Arrimaha Soomaaliya
Soomaliya 17.02.2020. 17:50